के हो राष्ट्रघात, कसरी भयो लम्पसारवाद | www.24nepal.com
काठमाडौ, बिमल नेपाल । भारतको पटनाबाट मोदी सीधै जनकपुर आउनुको कारण बाटो छोटो हुनु मात्रै होइन । संघीयतापछि पहिलोचोटि मधेसलाई टार्गेट बनाउनुको पछाडि धेरै सांकेतिक कारण छन् । जसको पुष्टि जनकपुरको सभामा देखिएको स्वतन्त्र मधेसको प्लेकार्ड र दुई नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले गर्छ ।
त्यस्तै, आकार बिगारेर राखिएको नेपालको झण्डाले बिम्बात्मक ढंगमा राष्ट्रमाथि व्यंग्य गरेको छ । तर, अहिले देशप्रेमी भएर विरोध गर्नेहरूले यो कुरालाई गौण बनाएका छन् । बरु, मोदी र ओलीले पहिरिएको मैथिली सभ्यताको पहिरनलाई मूल मुद्दा बनाइरहेका छन् । एक जना पूर्वभाजपा सांसदले मिथिला क्षेत्र भारतको भनेर दिएको प्रतिक्रिया प्रगतिशीलहरूलाई खासै बिझेको छैन, जति मोदी आउँदा काठमाडौं सहर सफा गरेको विषयले मन कुँडिएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र भारतीय सांसदले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारले आपत्ति जनाइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले पनि औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको छ । तर, देशप्रेमी प्रगतिशीलहरूले फेसबुक स्टाटसमा केही लेखे पनि औपचारिक रूपमा विरोध गरेका छैनन् । यसले विषयलाई बुझ्न केही सहज बनाउँछ । प्रधान कुरालाई गौण बनाएर प्रगतिशीलहरूले प्रधान बनाएका केही प्राविधिक विषयमा कुरा गरौं ।
नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो । त्यतिबेला पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले खुलेरै विरोध गरे । यसै कारण कतिपयले ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताको उपमा दिए । एमालेजनले खुलेर प्रशंसा गरे । विरोध गर्नेहरूले ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ भने । विरोध र प्रशंसा गर्ने दुवैले ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने गरेका छन् । नाकाबन्दीको विरोध गर्नु राष्ट्रवाद थियो कि थिएन ? थाहा छैन । तर, ओलीले नाकाबन्दीको विरोध गरेर गल्ती गरेका होइनन् । भारतले नाकाबन्दी गरेपछिको झोकमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि भयो । जुन देशको हितमा थियो, छ ।
हुन तः यस्ता गौरवको आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । तर, सहयोगमा नै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा जुन सम्झौताका साथ अरुण तेस्रोको शिलान्यास भएको छ, त्यो खुशीको कुरा हो । बरु, आयोजना निर्माणको काम चाँडो सक्न दबाब दिनुपर्छ । अरुण तेस्रोको मामलामा भारतसँग भएको सम्झौता असअघिका सम्झौता जस्तो नहोस् !
प्राविधिक कुरामा अल्झेर मूल मुद्दालाई ओझेल पार्ने फेसबुके विश्लेषकको बहकाबमा पछि लाग्नु बुद्धिमानीपूर्ण कुरा होइन । त्यसैले, यो सरकारले चीन र भारतसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्यो भने त्यसैलाई गुणस्तरीय मान्नुपर्छ । राष्ट्रघाती सम्झौताको चाङले थिचिएका हामीले अहिले कुनै राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता नहुनु र सम्बन्ध सुध्रनुलाई उपलब्धि मान्न सक्नुपर्छ ।
दम्भ र अविश्वासले एमाले-माओवादी पार्टी एकता ‘होल्ड’ मा
प्रहरीकी छोरीले लेखिन् प्रचण्ड र ओलीलाई खुल्ला-पत्रः ‘आफ्नै देशमा फेरिपनि बन्दुक बोक्नु नपरोस्
विश्वमै सर्वाधिक कर असुल्ने मुलुक नेपाल !